Fifandraisana iraisam-pirenena · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fifandraisana iraisam-pirenena · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Fifandraisana iraisam-pirenena tamin'ny Oktobra, 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana31 Oktobra 2018
Shina: Misondrotra Saingy Mahatsiaro Ho Mihiboka
Voahodidin'ny 85% amin'ireo toerana mafana ara-politika manerana ny tany i Shina, hoy ny profesora ambony dia ambony iray; ary ilainy ny halalaka amin'ny fifandraisana amin'ireny sy ny olana ara-jeopolitika hafa izay atrehiny, manomboka amin'ny fidirana amin'ireo ranomasina manodidina azy.
Amerika Latina30 Oktobra 2018
Mitombo Indray ny Gazety Voarara sy ny Raharaha Khatami any Etazonia
Mihabetsaka ireo gazety sy gazetiboky nakaton'ny Kaomisiôn'ny Famelàna sy Fanaraha-maso ny Asa Fanaovangazety - sampan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny "Islamic Guidance" - tahaka ny gazety mpivoaka isan'andro, Shargh, sy ny mpivoaka isam-bolana, Nameh ary ny Hafez.
Rosia: Ireo Mpifidy Tsy Legioma ary Vaovao Hafa Mikasika Ny Fifidianana
Eoropa Afovoany & Atsinanana30 Oktobra 2018
Roa herinandroa sisa mialoha ny fifidianana Rosiana Duma; ary tsy dia lavitra ihany koa ny fifidianana ny ho filoham-pirenena. Hitanao etsy ambany ny topimaso maimaika iray amin'ny fandrakofana ny fifidianana avy amin'ny tontolon'ny blaogy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Oktobra 2018
Tamin'ny Novambra 2007 nanao ny fitsidihany fahefatra tao anatin'ny roa taona tao Tehran ny filoha Venezoeliana Hugo Chavez mba hanasonia fifanarahana ara-toekarena bebe kokoa miaraka amin'i Iràna. Notsikerain'ireo Iraniana mpianatra sy blaogy maro mpomba ny havia ilay fifandraisana mpinamana nisy teo amin'ilay filoha ''sosialista'' Chavez sy ny Repoblika Islamika.
Iran : Hafatry ny Taombaovao avy amin’i Barack Obama
(Marihina fa tamin'ny volana Aprily 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nanomboka tamina hafatra nahagaga avy tamin’ny filoha Amerikana Barack Obama ny taom-baovao Iraniana tamin’ity taona ity (2009), niresaka ho an’ireo vahoaka Iraniana izy ary vao voalohany ho an’ireo mpitondra ao amin’ny Repoblika Islamika, izay niantsoany ho amin'ny fanombohana vaovao...